Gịnị bụ free software? | Site na Linux
Gịnị bụ free software?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Faịlụ FileLet jiri
El software n'efu (na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bekee, ọ bụ ezie na aha a na - agbagha mgbe ụfọdụ na "enwereghị onwe" n'ihi enweghị nghọta nke okwu "free" n'asụsụ Bekee, nke mere eji "free software") bụ aha sọftụwia na - asọpụrụ ọrụ nnwere onwe ha zụrụ ngwaahịa na, Ya mere, ozugbo nwetara ya nwere ike ịbụ eji, depụtaghachiri, mụọ, gbanweema kesaa n’efu.
Dị ka Free Software Foundation, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na - ezo aka na nnwere onwe nke ndị ọrụ iji gbaa ọsọ, idetuo, kesaa, ịmụ ihe, gbanwee ngwanrọ na kesaa ngwanrọ.
A na-ewere sọftụwia ka ọ bụrụ n'efu ma ọ bụrụ na ọ zutere ọnọdụ ndị a:
Enwere ike iji mmemme ahụ mee ihe ọ bụla
Enwere ike ịnweta koodu isi ya
Enwere ike imepụta usoro ihe omume ahụ
Ndozi nwere ike bipụtara
Ihe dị mkpa ịkọwapụta bụ na free software dabere na ẹdude ọgụgụ isi iwu na-enye ukwuu nnwere onwe, ma ọ bụrụ na onye osobo ụfọdụ ọnọdụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-enye ohere mgbanwe na mkpochapu nke ngwanrọ, ihe a na-amachibidoro iwu na ihe a maara dị ka “sọftụwia nwere ikike”, ma ọ bụrụhaala na mmadụ kwadoro ọnọdụ nke ime ka mgbanwe ndị ahụ ruo ụwa ndị ọzọ aka. O sitere na eziokwu na ọ bụrụ na anyị niile ekere òkè, anyị niile ga-aka mma.
N'ime sọftụwia na - akwụghị ụgwọ enwere ọtụtụ ụdị ikike:
GPL, otu n’ime ikikere a kacha mara amara ka ọrụ GNU kere.
LGPL, nke yiri GPL, mana ọdịiche dị na mpaghara ọ nwere
Creative Commons: ọ bụ n'ezie aha nke gụnyere ọtụtụ ụdị ikikere nke etinyere na ọdịnaya okike, dịka eserese, ederede ma ọ bụ egwu. A na-ahụta ụfọdụ ikikere ndị a n'efu.
Enwekwara Open Software, nke onye na-ebuputa ya bu akwukwo ikike BSD. Open software na-enye ohere redistribution nke koodu na ngwanrọ, na-enweghị ụdị ịkpa ókè ọ bụla, mana anaghị ekwe nkwa na koodu isi nke otu nwere ike ịnweta mgbe niile. Nke ikpeazụ bụ isi ihe dị iche na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
1 Kedu ihe a na-ahụta dị ka sọftụwia nwere ikike?
2 Main Uru nke Free Software n'elu n'onwe Software
3 Echiche andgha na Eziokwu nke Free Software vs. Emechiri Emechi ma ọ bụ Nkeonwe Software
Kedu ihe a na-ahụta dị ka sọftụwia nwere ikike?
A na-akpọ sọftụwia nwere ihe n'ihi na iji ya na-egbochi onwe gị ikike mmadụ ga-enwe n'ụzọ nkịtị. Ihe ngwanrọ nke ikikere na-eji nkwekọrịta ikike iji ojiji eme ihe, ma ọ bụ EULA maka aha nnabata ya n'asụsụ Bekee. Ikike a na-egbochi ojiji nke software na ụzọ dị iche iche. Isi ihe bụ na ọ na-amachibido ịmezigharị usoro ihe omume ahụ ma gbochie ihe m nwere ike iji mmemme ahụ.
Ihe atụ nke a bụ ndị na - ahụ maka ngwaike, ndị ikikere ha na - enye ohere iji ya rụọ ọrụ na ngwaike ọ bụla, yana sistemụ arụmọrụ doro anya.
Anyị na-ahụ ụdị nrụnye nke usoro mmemme. Nke a abụghị usoro ziri ezi, mana usoro ndị a dị ma ọ bụ obere dị ka ndị a:
Otu na-agba ọsọ installer (na-abụkarị site na ịpị abụọ na faịlụ .exe)
Ozi nnabata ga-apụta
A na-arịọ gị ka ị kwenye na ikikere
A gwara gị ka ịhọrọ folda ebe ị ga-etinye ya
A gwara gị ka ị kwenye
Ejiri faịlụ ndị kwekọrọ
Isi ihe dị iche na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na sọftụwia nwere ikike dị na akwụkwọ ikike nke mmadụ nabatara na ọkwa c. Nkwekọrịta nke mmemme bụ nke na-egosi ma ọ bụ mmemme n'efu ma ọ bụ nke aka ya. Ọzọkwa, n'ime mmemme ihe omume nwere ọtụtụ edemede:
Nkwụ ụgwọ: ngwanrọ nke onye ọrụ ga-akwụ ụgwọ iji nweta ha ma nwee ike iji ya n'ụzọ iwu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ikike eji eme ihe na-ejedebe na oge a ga-akwụghachi ya ọzọ iji gaa n'ihu na-eji ya.
Demos / Shareware: Ihe Nlereanya nke ụdị mmemme a bụ Winzip ma ọ bụ Winrar. Na mmemme ndị a, ọrụ ha na-ejedebe na ọnụọgụ ụbọchị.
Free: Ndị a nwere ike ibudata n'efu na ịntanetị ma enwere ike iji ya na-enweghị mmachi, ọ bụ ezie na a na-enwekarị ụdị akwụ ụgwọ ya nke nwere atụmatụ ndị ọzọ. Otu ihe atụ nke ndị a bụ Winamp.
Ohaneze, Proprietary Software na-mara n'okpuru aha nke Emechiri Emechi Software ma ọ bụ Proprietary Software. Ochichi bu aha kwesiri ekwesi n’ihi na, dika anyi huru, o napu anyi ikike.
Main Uru nke Free Software n'elu n'onwe Software
Iji kọwaa uru ndị a, ka anyị were ihe atụ nke ihe anyị niile ji arụ ọrụ taa, ekwentị. Ohaneze, mmadụ na-enweta ekwentị site na ịzụta ya n'aka ụlọ ọrụ na-abụghị onye na-arụpụta ekwentị, kama ọ bụ onye na-eweta ọrụ ekwentị.
Companylọ ọrụ ahụ na-ere gị ekwentị na "ikikere iji ojiji", nke na-etinye ụfọdụ ọnọdụ na gị, dịka obere oge ị ga-eji debe ọrụ ekwentị yana ọrụ ị nwere ike iji ekwentị ahụ. A na-egbochi ya ime ihe ụlọ ọrụ ahụ achọghị ka ị jiri ekwentị gị mee, ma ọ bụ nke ọ chọrọ ịkwụ gị ụgwọ mgbakwunye.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ha boro ụgwọ ego ọzọ iji nye gị koodu nke nyere gị ohere ịgbanwe ụlọ ọrụ, ọbụlagodi mgbe oge opekata m agwụla.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ha na-egbochi gị iji ekwentị gị na-eme ihe, nke akụrụngwa nwere ike ime, mana ụlọ ọrụ ahụ na-etinye mgbochi amachibidoro gị dị ka ọrụ mgbakwunye, ma ọ bụ iji ree gị ngwaọrụ dị oke ọnụ. Ọbụna ha na-amanye gị ịgbanwe ekwentị gị ma ọ bụ tụfuo ma zụta ọzọ mgbe ha na-achọghịzi ịkwado ọrụ maka ụdị ekwentị ekwentị nke ụlọ ọrụ na-ewere dị ka nke ochie, dị ka o mere na brik.
Ma mgbe ahụ ị nwere ndị na-emepụta ekwentị, ndị na-akwụ gị ụgwọ maka ngwanrọ iji jikọọ na ekwentị, ma ọ bụ maka obere ngwa, dị ka ọ dị na ekwentị ama ama n'oge a. Akwụkwọ ikike ahụ ga-akwụsị ozugbo ị metụrụ ihe nkedo, ma ọ bụ ha nwaa ịgba gị ụgwọ maka ịgbanwe batrị ahụ.
N'aka nke ọzọ, inwere ekwentị efu. Atụmatụ ekwentị bụ n'efu, yabụ enwere ndị nwere ike inye aka iji dozie nsogbu ndị na-eme n'ọnọdụ ụfọdụ, dịka iji ekwentị n'etiti ọhịa dị na Patagonia, ihe onye nrụpụta nkịtị agaghị etinye uche ya nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ bụghị kpomkwem niche gị.
Ma ị nwere ike iwunye mmemme na egwuregwu ịchọrọ site na ijikọ ha na kọmputa gị na sọftụwia nke mmadụ mepụtara maka onye nhazi onwe ya na onye ọzọ gbanwere ka ọ were ekwentị a na-arụ ọrụ. I nwekwara ike iji ya maka ihe ndị nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ chere n’oge ahụ, dị ka ekwentị nwere igwefoto na-eziga foto ọ bụla x sekọnd ma nye gị ohere ijide teleconference pseudo na netwọkụ nkịtị, na-akwụghị ụgwọ maka ọrụ ahụ. Ma ọ bụ gbanwee ngwanrọ niile kpamkpam maka otu ihe ị na-eji na kọmputa gị ma hazie ya ka ọ bụrụ ihe masịrị gị, ọ bụghị nhọrọ nke ọnụ ụzọ nke ụlọ ọrụ ekwentị a ma ọ bụ ụlọ ọrụ ekwentị na-enye gị. Ma ọ bụrụ na ịchọọ ụlọ ọrụ ekwentị ahụ, ịnwere ike ịgbanwe oge ọ bụla ịchọrọ site na onye ọzọ, yana ọbụna iji ọtụtụ n'otu oge ahụ, dịka ụdị oku, ozi ma ọ bụ ihe ịchọrọ ịme. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ekwentị na-eme ihe ị chọrọ, ọ bụghị nke ọzọ.
Free software na-agba mbọ na-enyeghachi gị ikike na-ekwesịghị mgbe a napụrụ gị, na na ị na-emebu na-enweghị. Free software kwenyere na ọ bụrụ na anyị niile na-eso, anyị niile ga-aka mma. Ọ dị ka utopia, mana ọ bụ ihe a na-ahụ anya; Ọ na-eme na gburugburu gị n’enweghi ike ịchọpụta ya.
Echiche andgha na Eziokwu nke Free Software vs. Emechiri Emechi ma ọ bụ Nkeonwe Software
A na - eme ndị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọfụma, yabụ ọ dị mma karịa akụrụngwa nkeonwe
Gha: dị ka ọ dị na mpaghara niile, ogo ahụ dịgasị iche, mana sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na - enye ọtụtụ mmadụ ohere inyocha koodu ma gwaa mmelite. Kinddị nyocha na nyocha a, n’ọnọdụ ụfọdụ puku kwuru puku mmadụ, na - eme ka sọftụwia dị mma karịa sọftụwia nwere ya. Ọbụna ọtụtụ n'ime ndị a na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ngwanrọ na ntọala siri ike.
Free Software bụ n'efu
Gha: Ihe ngwanrọ efu - sọftụwia efu na bekee, si na “Onwere dị ka nnwere onwe ikwu okwu, ọ bụghị dịka biya efu”, onye ntụgharị ya bụ: "Ọnwere nnwere onwe ikwu okwu, ọ bụghị dịka biya efu." Nke a bụ disquisition na ikekwe na-eme ka ndị ọzọ nwee ezi uche na ndị na-asụ bekee, ọkachasị n'ihi ngwụcha nke okwu ahụ bụ "n'efu." Agbanyeghị, ọtụtụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ bụ n'efu. Ọbụna mgbe a na-akwụ ụgwọ ya, ozugbo azụrụ ikike ngwanrọ ahụ, enwere ike depụtaghachi ya kpamkpam, ma ọ bụrụ na ezutere ọnọdụ ikike.
Na sọftụwia efu ọ dịghị onye na-akpata ego
Gha: Ma ọ bụghị ya, olee otu ị ga-esi zụta ụfọdụ ụlọ ọrụ ngwanrọ Free Software, dịka MySQL, dịka ọmụmaatụ, ndị Sun Microsystems nwetara n'oge na-adịbeghị anya? Enwekwara ụlọ ọrụ ndị na-emepụta sọftụwia efu na mba anyị ma wepụta ego ebe ọ bụ na ihe a na-ere ahịa abụghị mmemme ahụ n'onwe ya, kama ọ bụ nkwado na ọrụ mmepe omenala.
Akwụkwọ ikike bụ nkwekorita nke onye edemede nke ngwanrọ na-enye onye ọrụ ikike ka o mee "nrigbu iwu". N'ime akwụkwọ ikikere n'efu, ndị kacha mara amara bụ:
MPL na ikike ikike
Site na ikikere GPL (GNU General Public License), onye edemede na-ejigide ikike nke onye nwe ya ma kwe ka mweghachi na mgbanwe n'okpuru usoro ezubere iji hụ na ụdị nsụgharị niile nke ngwanrọ na-anọgide n'okpuru usoro mgbochi nke GNU GPL n'onwe ya.
Ihe dị ka 60% nke sọftụwia enyere ikikere dịka Free Software na-eji ikikere GPL. Mgbochi ikike a: kesara ụdị ndị agbanwere nke mbụ ya dị n'okpuru ikikere GPL, ga-enwerịrị ikikere n'okpuru GPL. Nke ahụ bụ, a ga-emegherịrị koodu mmalite nke onye ọ bụla chọrọ ịgụ na / ma ọ bụ gbanwee ya, ekwesịghị imechi ya. N'ihe banyere nke ikpeazụ, a ga-emebi ikike.
Akwụkwọ ikike BSD bụ ikike sọftụwia enyere maka sistemụ BSD (Berkeley Software Distribution). Ọ bụ nke ndị otu ikikere ngwanrọ mepere emepe na isi ihe dị iche na GPL bụ na o nwere mmachi pere mpe. Akụkụ nke ikikere BSD bụ na ọ na-enye ohere iji koodu isi na Software mechiri emechi, megidere GPL.
MPL ikike (Mozilla Public License na Spanish ma ọ bụ Mozilla Public License na Bekee) bụ ihe mepere emepe yana ikikere sọftụwia na-akwụghị ụgwọ. Ọ bụ Netscape Communications Corporation mepụtara ya, iji tọhapụ Netscape Communication 4.0, nke ga-emesị bụrụ onye ama ama na ọrụ Mozilla a ma ama. Ikike MPL zuru oke na nkọwa nke ngwanrọ mepere emepe yana nnwere onwe anọ nke Free Software. Agbanyeghị, MPL na-ahapụ ụzọ iji nweta ngwanrọ na-enweghị n'efu na ngwanrọ na-enweghị ịkwụsị mmachi nke koodu ahụ ma ọ bụ nyeghachi ikikere n'okpuru otu ikike.
Ugbu a enwere ntọala, ihe Ntọala ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ (FSF), nke bu ihe ejiri gosiputa ma ikikere enweghi ego ma obu na odighi. Iji hụ ikikere niile anaghị akwụ ụgwọ, lee: https://www.gnu.org/licenses/license-list.html
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Gịnị bụ free software?
Ihe 11 kwuru, hapụ nke gị
* Nsụgharị ziri ezi nke "Nnwere onwe dị ka nnwere onwe ikwu okwu, ọ bụghị dị ka biya efu" bụ "Nnwere onwe dị ka nnwere onwe ikwu okwu, ọ bụghị na biya efu", n'eziokwu n'asụsụ Spanish ọ dịghị mmejọ na-eme n'asụsụ Bekee, ebe «n'efu "nwere ike ịpụta ma" free "na" free ".
Ka anyị jiri Linux dijo
Daalụ! Gbazie na kwukwara kwuru banyere «ambiguity» nke okwu «free» na English. Ọ bụ nnọọ eziokwu. Cheers!
Zaghachi Ka Anyị Jiri Linux
Ana m asị gị nnọọ! Ọ dị mma itinye ihe site n'oge ruo n'oge. N'ịga n'ihu na isiokwu ahụ, echere m na "nnwere onwe" na-achọ karịa "n'efu." Iji tinye ihe atụ: Internet Explorer ma ọ bụ Windows Live Messenger nwere onwe ha, mana ha anaghị akwụ ụgwọ.
ihe omume ụlọ akwụkwọ na-agwụ ike ugbu a, m ga-enyocha
I kwuru eziokwu Hahahahahaha
kristian elihu mendez nuñez dijo
Ihe edeturu na-adọrọ mmasị nke ukwuu, mana gịnị ga-abụ ndepụta nke sọftụwia kachasị mma n'efu?
Olee ndị kacha mara amara?
Ọ naghị emetụta eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ gbanwere koodu mmalite, oge niile?
Gịnị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ọzọ enweghị mmasị na ya, enweghị ike ịhụ ụdị esemokwu iji gbanwee koodu isi na oge ọ bụla?
Kedu ihe dị iche na ngwanrọ mepere emepe na n'efu?
Echere m, gịnị bụ uru inwe ngwanrọ mepere emepe ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye koodu isi ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe onye nwe ya nwere
Zaghachi onye Kristian elihu mendez nuñez
EJIJI AS .SOP EGO. Ha dee / dee: "Site na ndabara" Ekwesịrị ikwu ya: "NKE MB OR".
karen marin dijo
ozi magburu onwe ya banyere sọftụwia na-akwụghị ụgwọ.
Zaghachi karen marin
adrii castilla dijo
ekele m Linux ọrụ dị oke mkpa
Zaghachi adrii castilla
Andrea Elizabeth Carvajal Basto dijo
eme Ọnwa 7
Ezigbo ozi! Otu obi abụọ, na-atụle okwu bilitere site n'iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ karịa ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnye m ụfọdụ ihe atụ nke ngwanrọ n'efu na-adị adị ma enwere ike iji ya dị ka enyemaka na mpaghara dị iche iche ma ọ bụ n'ozuzu site n'aka SMEs.
Zaghachi Andrea Elizabeth Carvajal Basto
Iji mezue ozi na peeji a bit na ụfọdụ obi abụọ na-anọgide m. Ekpebiri m ime nyocha ma chọpụta na peeji nke Geekno, na ọdịiche dị n'etiti oghere na nke efu bụ na n'ihe gbasara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ọ bụghị naanị na enwere ike ịnweta koodu isi, mana ọ ga - ekwe omume ịgbanwe ya, kesaa ya na ọbụna azụmahịa maka mgbanwe ndị ahụ, ọ bụrụhaala na anyị agbakwunye ọrụ mbụ na ikikere ya kwekọrọ na ya. N'aka nke ọzọ, sọftụwia mepere emepe nwere ike ghara ikwe ka azụmahịa nke ọbụna mgbanwe na koodu ahụ, ma ọ bụ naanị nkesa mgbanwe ndị a kwuru. (M Blanco, 2019).
Ọ bịakwara m chọọ ihe atụ nke mmemme ngwanrọ na-emeghe ma na-emeghe.
Dabere na ibehatari peeji nke, ufodu akuku nke kachasi nma software bu ihe ndia:
Dị ka akwụkwọ ComputerHoy si kwuo, ụfọdụ mmemme mmemme mepere emepe bụ:
3. Mozilla Thunderbird
Microsoft Bing na-anwa igba bọọlụ OpenOffice? Nahhhh ....
Otu esi ejikọ WPA / WPA2 na Ubuntu